यौन / स्वास्थ्य Archives -
Category: यौन / स्वास्थ्य
एउटा यस्तो स्थान जहाँ ५ दिनसम्म निर्वस्त्र हुन्छन् महिला
February 10, 2021 अखवार अनलाइनLeaveaComment on एउटा यस्तो स्थान जहाँ ५ दिनसम्म निर्वस्त्र हुन्छन् महिला
काठमाडौँ । सुन्दै पनि पत्यार लाग्न नसक्ने घटना संसारको विभिन्न स्थानमा भइरहेका हुन्छन् । हुन पनि यो संसार अनौठो रहस्यले भरिएको छ । आज हामी यस्तै एउटा अनौठो कुराको बारेमा आज हामी तपाइँलाई जानकारी दिँदैछौँ । भारतको एउटा गाउँमा अनौठो परम्परा रहेको छ ...
स्तन बढाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस्
November 19, 2020 November 19, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on स्तन बढाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस्
शिशुको लागि अमृत मानिने स्तन उत्तेजित अंगपनि हो । स्तन शिशुका लागि दूध बनाउन मात्र होइन् । यौनका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । स्तनको वृद्धि धेरैजसोम...
पुरुषका नजरमा ठूला स्तन किन आकर्षक मानिन्छन्
November 19, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on पुरुषका नजरमा ठूला स्तन किन आकर्षक मानिन्छन्
काठमाडौं । महिलाको आकर्षण संग जोडिएका विभिन्न अंगहरु जस्तै अनुहारको बनोट, शरीरको बनावट, रुपरंग संगै उनीहरुको छातिमा रहेको बाहिरी अंग स्तनले पनि पूरुषलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ । प्राय विदेशी समाजमा महिलामा रहेको स्तनको विकसित रुप अर्थात ठूला स्तनलाई आकर...
योनीका आकारका आधारमा यौनसन्तुष्टिमा के फरक पर्छ ?
October 30, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on योनीका आकारका आधारमा यौनसन्तुष्टिमा के फरक पर्छ ?
व्यक्तिपिच्छे मानिसको अनुहार आकारप्रकार फरक फरक हुने गर्छ । सबै मानिसहरुको आकारप्रकार र रुप एकै हुने गर्दैन । ठीक यही कुरा योनी अर्थात् महिलाका प्रजनन अंगको मुख्य भागको हकमा पनि लागू हुन्छ । महिलाको योनीको आकारले के फरक पर्छ रु यो युगौंदेखि उठ्दै ...
कम मात्रामा यौन सम्पर्क गर्ने महिलाको महिनावारी चाँडै रोकिने, रोगको पनि त्यतिनै खतरा
June 15, 2020 June 15, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on कम मात्रामा यौन सम्पर्क गर्ने महिलाको महिनावारी चाँडै रोकिने, रोगको पनि त्यतिनै खतरा
काठमाडौं १ असार । धेरै कम यौनसम्पर्क गर्नेहरुको चाँडै महिनावारी रोकिने एक अध्ययनले पत्ता लागेको छ। अनुसन्धानकर्ताले सप्ताहमा एकपटक यौनसम्पर्क गर्नेहरु भन्दा महिनामा एकपटक यौनसम्र्पक गर्नेहरु २८ प्रतिशतले चाँडै महिनावारी रोकिएको पत्ता लगाएका...
कामुख मसाजले पार्टनरसंगको सम्बन्ध बलियो बनाउछ थाहा पाउनुहोस
June 6, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on कामुख मसाजले पार्टनरसंगको सम्बन्ध बलियो बनाउछ थाहा पाउनुहोस
दिनभरको दौडधुप र थकानका साथ घर पुग्दा कहिलेकाहीँ मनमा लाग्दो हो कसैले यसो हल्का मसाज गरिदिए कति आनन्द आउँथ्यो होला । कहिलेकाहीँ पार्टनरले यसो ज्यान थिचिदिँदा, टाउको मुसार्दा पनि क्या आनन्द आउँछ । थकान मेटाउने मात्रै हैन ज्यान चङ्गा बनाउनसमेत मसाज ...
June 4, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on पुरुषहरु किन महिलाको स्तनमा आकर्षित हुन्छन ? यस्तो छ रहस्य
तपाईंलाई थाहा छ पुरुषहरु महिलाको स्तनमा किन आकर्षित हुन्छन् ? आखिर किन उनीहरुको यो बानीलाई मानिसहरुले कामवासनाको रुपमा हेर्ने गर्दछन् ? यो प्रश्नले महिलाहरुमाथि पनि त्यत्तिकै खुल्दुली मच्चाइरहेको होला । तर यसको जवाफ पुरुषहरुसँग पनि छैन । आउनुहोस्, यो...
कस्तो नाइटो भएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
June 2, 2020 June 2, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on कस्तो नाइटो भएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
महिलाको सुन्दरतामा मात्र होइन समुन्द्र शास्त्रमा पनि निक्कै महत्व छ नाइटो अर्थात नाभीको । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार मानिसको बोली चाली र ब्यबहारबाट समेत थाहा नपाएको कुरा नाभीबाट थाहा हुन्छ ।समुद्रशास्त्रका अनुसार जुन स्त्रीको नाभी लामो र अनियमित हुन्छ...
May 27, 2020 May 27, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on वीर्यदाताको कथा : बिहे नगरी बाउ तर सन्तान चिन्दैनन्
अविवाहित मिलनलाई उनको बहिनीको फोन आयो। ‘दादा, स्पर्म (वीर्य) डोनेट गर्नुपर्ने भयो!’ उनी अन्कनाउँछन्। ‘म पछि कल गर्छु,’ भन्दै उनले फोनको लाइन काटिदिए। केही दिनअघि मात्र उनकी बहिनीले आफू काम गर्ने क्लिनिकबारे बताएकी थिइन् उनलाई। उनले भनेकी थिइन्, ‘म का...
निरन्तरको लकडाउनका कारण मानिसहरुका यतिबेला ढाँड दुख्ने समस्या देखिएको छ । यो अवस्थामा अधिकास मानिसहरु आराम गर्ने भएका कारण ढाड दुख्यो भनेको सुन्नमा आएको छ । लकडाउनका कारण हिजोआज लामो समय एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने बानीका कारण ढाड दुख्ने समस्या सामान्य...